Al-Shabaab oo War kasoo saartay Soomaalidii Badda ku dhamaatay iyo Sababta ku kaliftay in ay Tahriibaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xarakada Al-Shabaab ayaa ka hadashay musiibadii dhawaan ku habsatay Boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed ah kuwaa oo ku dhintay Badda Meditranean-ka, kadib markii ay la dagtay doontii ay ku safrayeen.
Afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere ayaa ugu horeyn tacsi u diray eheladii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen boqolaalkii qof ee Soomaalida ahaa ee noloshooda ku waayay Badda, xili ay u haajirayeen wadamo kuyaala Qaarada Yurub.
Waxa uu sheegay Cali Dheere in ay aad uga xun yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhamaanaya Baddaha, waxa uuna tilmaamay in sababta ay dalkooda uga cararayaan ay tahay Shaqo la’aan baahsan oo dalka ka jirta, waxa uuna tilmaamay shaqooyinkii dalka in loo gacan galiyay dad ajaaniib ah.
”Dhalinta Soomaaliyeed waxa Tahriibka ku qasbaya oo baddaha ugu dhimanayaan waxaa sabab u ah shaqo la’aanta dalka, Shaqooyinkii iyo goobihii wax soo saarka dalka ajaaniib ayaa gacanta loo galiyay. waad ogtihiin Dekadda Muqdisho waxaa ka shaqeeneysay 5,000 qof oo Soomaali ah oo isugu jirtay dhalinyaro, dhax dhaxaad iyo dad da’ ah, maantana waa laga eryay shaqooyinkii oo ajaaniib ayaa la wareegay, aan isweediino dadkaasi xagee qabanayaan ” Ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
Afhayeenka Al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegay in Garoonkii Diyaaradaha iyo goobihii kale ee wax soo saarka dalka Ajaaniib lagu wareejiyay, dhalinyaradii dalka wax u baratayna ay ku qasbanaadeen in ay iska tahriibaan mar hadii ay waayeen shaqooyinkii ay xaqa u lahaayeen.
Sheekh Cali Dheere ayaa xusay in Deeganada Somaliland iyo Puntiland ay kusoo qul qulayaan ajaaniib shaqo doon ah oo ka kala imaanaya qaar kamid ah Wadamada Afrika, waxa uuna tilmaamay in dadkaasi lasoo dhaweesanayo kuwii Soomaalida ahaa ee shaqada u baahnaana la iska fogeenayo.
Hadalkan kasoo baxay Adhayeenka Al-Shabaab ayaa imaanaya xili maalmo kahor Badda Meditranean-ka, ay ku dhamaadeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkooda ka tagay una haajiray Wadamo kuyaala Qaarada Yurub balse qadartu ku qabsatay Badda gudaheeda.